Gịnị bụ ihe ndị kasị nkịtị search engine njikarịcha azum?
Nyochaa SEO dịka usoro usoro zuru ezu na njedebe ikpeazụ iji nweta ọkwa elu weebụ gị na ndepụta nke SERPs, e nwere atọ isi search engine optimization strategies. A na-eji ọdụm òkè nke ụlọ ọrụ nke ikike dị iche iche mee ihe, ma ọ bụ site na ụlọ ọrụ dị iche iche na-achọsi ike ịmalite ọrụ ha n'ịntanetị site na mmalite, ma ọ bụ ndị nataworị ihe ndị siri ike na azụmahịa brik na ngwa agha na-eche na ọ dị mkpa ịga n'ihu ma kwaga n'Ịntanet.
Ma ị ga-anwale onwe gị na Mee N'onwe Gị SEO, ma ọ bụ na-abatalarịrị mkpebi nke ọma iji nweta enyemaka site n'aka ndị ọkachamara ahụmahụ ọkachamara nke ụlọ ọrụ, ma, ị ga-ama nke atọ atọ ọchụchọ engine. Naanị buru ha n'uche tupu ịmalite na njikarịcha na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ dị mfe ịdị mma
Ka anyị malite na White okpu SEO, dị ka usoro a maara nke ọma na nke a na-ejikarị eme ihe, site na ndị ọzọ search engine optimization strategies. Ntinye maka okpu okpu SEO pụtara inwe ọrụ kachasị mma iji bulie ọnọdụ nchịkọta weebụ nke ebe nrụọrụ weebụ, na-agbaso ntuziaka na ndụmọdụ ndị Google n'onwe ya mere. Oke okpu SEO na-eziga na atụmatụ ezighi ezi na mmebi-enweghị oke, dịka ịmepụta ọdịnaya dị mma, na-eme ụlọ ọrụ njikọ (bụ ịkwụ ụgwọ!), Na-arụ ọrụ na njikarịcha HTML. Ee, ọ ga-arụ ọrụ siri ike ime. Ọ bụ ezie na ịhọrọ ụzọ ziri ezi nke White Hat SEO pụtara na ị nwere obi ike ma na-adabere na mgbe ụfọdụ ịdị umeala n'obi ma dị nwayọọ nwayọọ, mana ọganihu na-adịte aka na ogologo oge.
Ịgbanwe na akụkụ ọjọọ
Dị ka obi ọjọọ nke White okpu SEO ụzọ, Black okpu search njikarịcha azum ndị ọzọ pụta-adabere kama nnọọ ezigbo egwuregwu. Oghere okpu SEO na-eji usoro ọrụ nhazi dịgasị iche iche mee ihe iji mee ihe ọ bụla na-adịghị ike na mkpado Google algorithms. Ihe mgbaru ọsọ bụ isi, Otú ọ dị, nọgidere na otu - inweta ọkwa dị elu maka ibe weebụ. Ịmalite ije n'akụkụ gbara ọchịchịrị nwere ike ịnye gị ihe a na-ejighị n'aka, na mgbe ụfọdụ ọbụna dị ize ndụ, mana ọganihu ma dị mkpirikpi na ogo. N'ịme otú ahụ, okpu nwa okirikiri SEO na-agakarị maka iji eriri njikọ, ọdịnaya zoro ezo ma ọ bụ tinye aka, isiokwu nri na ọtụtụ mmebi ndị ọzọ.
Na-ewekọta ihe niile
E nwere ihe a na-akpọ Grey Hat SEO, nke na-ejikọta ihe kachasị mma nke abụọ kachasị mkpa search engine optimization strategies elele anya. N'ikwu eziokwu, ọkpụkpụ gụrụ ogwe amamihe SEO pụtara iji usoro iwu kachasị mma mgbe ọ bụla o kwere omume, na-eme ka ha nwee nkwenye ndị na-ekwe nkwa ma na-ejighị ya eme ihe.N'ụzọ dị otú ahụ, mmadụ nwere ike inwe ọganihu nwere ezi uche dị na ya, na-enweghị akwụ nnukwu ihe ize ndụ nke ijidere ya maka nkwekọrịta ma jiri Google merie ya.
N'ezie, ịhọrọ n'etiti ndị a dị iche iche nyochaa njirimara search engines kwesịrị ịbụ nhọrọ nke onye ọ bụla. Ọ bụ gị ka ị ga-ekpebi ụzọ ị ga-esi eme ihe. Naanị cheta ihe ntakịrị - ịme ihe na-adịghị ike nke algorithms ọchụchọ nwere ike iyi ihe dị mma n'anya ndị na-achọ naanị ogo ọganihu dị elu. Ma Google ka na-elekwasị anya n'Ịntanet. Ya mere, mgbe ị na-egwu egwuregwu egwu, cheta na a ga-ata ya ahụhụ n'oge ọ bụla, malite na nhazi penis nke ọma, na rue nkwụsị nke ikike ngalaba dum Source .